Alakamisy 07 janoary 2021- Taona B Md Lioka 4, 12-22a | FKMP
Alakamisy 07 janoary 2021- Taona B
« Tamin’izany andro izany, i Jesoa dia nentin’ny herin’ny Fanahy niverina tany Galilea indray, ary niely tamin’ny tany manodidina rehetra ny lazany. Nampianatra tao amin’ny sinagôgan’izy ireo Izy, ka nankalazain’izy rehetra. Nony tonga tany Nazareta tanàna nahabe Azy Izy, dia niditra tao amin’ny sinagôga araka ny fanaony tamin’ny andro sabata, ary nitsangana hanao ny famakian-teny. Natolotra Azy ny bokin’i Izaia Mpaminany, ka nony novelariny dia hitany ny teny voasoratra hoe: “Ato amiko ny Fanahin’ny Tompo, fa nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy sy naniraka Ahy hankahery ny torotoro fo, hilaza fahafahana amin’ny mpifatotra sy fahiratana amin’ny jamba, hanafaka izay nampahoriana ary hitory ny taom-pahasoavan’ny Tompo sy ny andron’ny famaliana.” Nony nahorony ny boky dia naveriny tamin’ny mpitandrina ka nipetraka Izy, ary nifantoka tany aminy avokoa ny mason’izy rehetra tao amin’ny sinagôga. Dia rafitra niteny taminy indray i Jesoa nanao hoe: “Androany no efa tanteraka eo amin’ny sofinareo izany Soratra izany.” Ary nankalaza Azy izy rehetra, sady talanjona noho ny tenim-pahasoavana naloaky ny vavany. »
Vao mamaky ity Evanjely ity aho dia toa manakoako ao anaty sofiko sahady ilay hira hoe : « Ato amiko ny Fanahy, ny Fanahin’izy Tompo, fa naosotra ahy hitory vaovao mahafaly sns….. »
Avy hatrany dia mahavelom-bolo satria manome hery, manome fanantenana. Mahavelom-bolo satria tonga i Jesoa miaraka amin’ny vaovao mahafaly ho ahy , ho anao , ho antsika rehetra satria eo an’Andriamanitra isika dia mahantra, gadra, jamba, nampahoriana.
Tonga izy hanome Fitiavana, hanafaka ahy amin’ny gadram-pahotana, hanokatra ny masom-panahiko ka ka ho sahy hijoro ho vavolombelony aho, hanafaka ny fahoriako amin’ny zavatra maro mangeja ahy amin’ny fiaianana an-davan’andro ka ahay hibanjina azy ampitokisana .
Jesoa dia tonga hameno ny banga , hanome ny fahasoavana maro fa mba haiko ve ny mandray izany fahasoavana izany ?Haiko ve ny mananararaotra miaina izany fahasoavana izany ?
« Ampio aho, tantano am-pitiavana Jesoa o
Fa raha ny heriko ihany dia ho kivy an-dalana aho »
Previous Post: Alarobia 06 janoary 2021- Taona B
Next Post: Asabotsy 2 Janoary Taona B